Dib-udhac ku yimid in Eritrea kusoo laabato IGAD [Akhri Sababta] - Worldnews.com
Kulankii shalay ay yeesheen hogaamiyaasha dalalka IGAD ku midoobay ayaa Ajandaha ugu wayn wuxuu ahaa soo
ASMARA - Dowladda Eritrea ayaa dib ugu soo laabaneysa xubinimadeeda Urur goboleedka IGAD Todobaadka dambe, iyadoo munaasabad arintaasi lagu shaacinayo lagu qaban doono...
ADDIS ABABA - Dowladda Eritrea ayaa la rajeynayaa inay dib ugu soo laabtay Urur goboleedka IGAD kadib heshiiskii ay kala saxiixdeen Eithiopia, kaasoo ay kusoo afjareen...
Gareowe Online 2018-07-09
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxwaynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa maanta oo Arbaco ah u ambabaxay dalka Itoobiya, gaara ahaan Magaaladda Addis Ababa, sida...
Gareowe Online 2018-09-12
Dib u dhac ku yimid ku soo laabashada Eritrea ee urur-goboleedka IGAD: SAWIRRO Waxaa dib u dhacay ku soo laabashada ay Eritrea ku soo laaban lahayd xubinnimadeedii urur...
ADDIS ABABA - Duulimaadkii ugu horeeyay oo ganacsiga ah ayaa mudo 20 sano kadib maanta oo Arbaco ah diyaaradda Ethiopian Airlines ku sameysay magaalada Asmara, ee...
Gareowe Online 2018-07-18
ADDIS ABABA - Duulimaadkii ugu horeeyay oo ganacsiga ah ayaa mudo 20 sano kadib maanta oo Arbaco ah diyaaradda Ethiopian Airlines ku sameysay magaalada Asmara, ee caasimadda dalka Eritrea. Qoysas is jecel oo ku kala go'doomay dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia 1998-2000 ayaa maanta kasoo duulay Addis Ababa, iyagoo halkaasi ay kasoo qaadeen labo diyaaradood oo ay leedahay Ethiopian...
​RW Ethiopia oo kulan deg deg ah isugu yeeray Madaxda IGAD
Ra’isal wasaaraha dalka Ethiopia Hailemariam Desalegn, ayaa kulan deg deg ah isugu yeeray madaxda waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Guddoomiyaha ururka Hailemariam Desalegn, ayaa waraaq uu u diray madaxdaas ku sheegay in todobaadka dambe la isugu yimaado shir ka dhacaya magaalada Addis Ababa si looga arrinsado xaaladda cakiran ee waddanka Suudaanta Koonfureed. Dalka...
Ka dib is baddelada gobolka ka dhacay, ayaa Eritrea si lama filaan ah waxay u noqotay waddan u furmay waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD, marka laga reebo Jabuuti, oo aysan weli gaarin heshiis rasmi ah. Inkasta oo dib u dhac uu ku yimid, ku soo laabashada Eritrea ee xubinnimadeedii urur goboleedka IGAD ee la filayey in uu todobaadkan dhaco, sida uu qorshuhu ahaa,...
ADDIS ABABA, Eithiopia - Wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda Eritrea ayaa maanta gaarey magaalada Addis Ababa, ee caasimadda dalka Ethiopia si ay uga qeyb-galaan wadahadallo lagu soo afjaro colaadda mudada dheer u dhaxeysay labada dal. Xubnaha wafdigan oo uu kamid yahay La-Taliyaha Madaxweyne Afwerki, Yemane Gebreab ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay Garoonka...
Madaxda Somalia, Eritrea iyo Ethiopia oo go\_'aano kasoo saarey Shirka Bahar Dar
BAHAR DAR - Hogaamiye-yaasha Soomaaliya, Eritrea iyo Itoobiya ayaa soo dhaweeyay tallaabada Gollaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ee cunaqabateynta looga qaadayo dalka Eritrea. Diblomaasiyiin ayaa sheegay in todobaadkii tagey in Gollaha Amaanka ay diyaarinayaan qaraar cusub oo lagu soo afjarayo xayiraadaha lagu soo rogay dalkan ku yaalla Geeska Africa 2009. Qorshahan oo sugaya...